You won’t ever see me seeking revenge for those who have done me wrong. I will simply liveahappy life just to prove that no matter what happened in my past, I refused to let it beat me.
ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ ဘဝမှာရှင်သန်ရုန်းကန်နေရင်း ကိုယ့်အတွက် မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့လည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးမှာပါ။ ကိုယ့်အပေါ်ကို မတရားမကောင်းကြံစည်ခဲ့တာကြောင့် ကိုယ့်အနေနဲ့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးမှာပါ။ အဲဒီလိုမျိူး ကိုယ့်အပေါ် စိတ်ဒုက္ခဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်စေပေးတဲ့သူကို ကျွန်တော်တို့တတွေ တွေးမိတိုင်းမှာ ဒေါသစိတ်နဲ့ ပူလောင် နေရတတ်ပါတယ်။
ငါကိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူ အလှည့်ကျမနွဲ့စတမ်းပေါ့ဆိုပြီး မချိတင်ကဲ ကျွေးကျော်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဒေါသအပူမီးတွေ လောင်မြှိုက် ခြင်းကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီအပူမီးတွေကို လွတ်ငြိမ်း ရအောင် ဘယ်လိုမျိုး နေထိုင်သင့်ပါသလဲ။
ကိုယ့်အပေါ်မ ကောင်းတဲ့သူကိုလည်း သူ့ထိုက်နဲ့သူကံအနေနဲ့သာထားလိုက်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ ရန်ကိုရန်ခြင်းမတုန့်နှင်းပဲ သူ့ အကုသိုလ်ကို ကိုယ့်အပူမီးအဖြစ်မခံလိုက်ပါနဲ့။ ပြန်ပြီး ကလဲ့စားချေလိုတဲ့စိတ်တွေမွေးမနေဘဲ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ရှေ့ဆက် လျှောက် ရမယ့် အနာဂတ် နေ့ရက်တွေကို အကောင်းဆုံးသာနေထိုင်သွားလိုက်ပါ။